China Carbon fibre roller fanamboarana sy orinasa | Yan Tuo
Ny rojon-koditra vita amin'ny kibon'ny karbaona dia misy fihenjanana ambany sy tsy fahalianana kely. Ny inertia-ny dia 1/5 fotsiny amin'ny an'ny vy vy nentim-paharazana, izay afaka manomboka haingana na mijanona;
Model No. G-01 Mahazaka harafesina √
Loko Mainty Metal VIRATY
Lanja 15kg Surface 3k glossy / arak'izay takiana
Fonosana Boaty taratasy, foam busaKitapo avo lenta famaritana 1500mm * 255mm * 234mm
Orgin Weihai Kaody HS 6815992000
Vao tsy ela akory izay, miaraka amin'ny fanavaozana bebe kokoa ny indostrian'ny famokarana eto an-toerana, ny milina indostrialy dia nivoatra tsikelikely tamin'ny làlan'ny kalitao avo lenta, fahombiazana avo, karbonina ambany ary fiarovana ny tontolo iainana. Ny rojon-koditra vita amin'ny kibon'ny karbaona dia misy fihenjanana ambany sy tsy fahalianana kely. Ny inertia-ny dia 1/5 fotsiny amin'ny an'ny vy vy nentim-paharazana, izay afaka manomboka haingana na mijanona; hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mahatratra 70% haingana kokoa noho ireo horonana vy nentim-paharazana; fiovana kely, fanoherana havizanana tsara, androm-piainana maharitra, vidin'ny fampiasam-bola indray mandeha mihoatra ny vy vy, sandan'ny fampiasana maharitra kokoa. Na izany aza, ny fepetra takiana amin'ny famokarana gazy karbonika dia avo dia avo ihany koa, na ny fahamendrehana amboniny na ny fifandanjana mavitrika, sns., Dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny milina iray manontolo.
Weihai Yantuo Composite Material Technology Co., Ltd., izay nanome horonan-taratasy fibre karbaona lehibe, antonony ary kely ho an'ny sarimihetsika, taratasy, bateria lithium, foil, lamba tsy tenona, mpanonta ary mpanamboatra milina hafa, dia mitondra mpanjifa . Mandritra ny fotoana ahazoana tombony ara-barotra, maro ny traikefa fampiharana mifandraika no voangony. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba ny vokatra namboarin'ilay orinasam-bokatra vita amin'ny kodiarana karbaona hanehoana ny tombony azo avy amin'ny rojom-pandrefesana gazy karbonika amin'ny milina indostrialy:
Ny fampiharana ny tady fibre karbaona ao anaty taratasy sy ny taratasy, ny sarimihetsika, ny foilant aluminium foil:
Amin'ny famokarana horonam-taratasy, ary koa ny ankamaroan'ny vokatra vita amin'ny taratasy, sarimihetsika ary aluminium, ny sakany sy ny hafainganam-pandehan'ny vokatra horonan-taratasy mandritra ny famokarana sy ny fanodinana dia mamaritra mivantana ny fahombiazan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny famokarana ny vokatra iray manontolo. Mandritra izany fotoana izany, ny sakany Ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana sy ny fiakaran'ny haingam-pandeha dia misy fiatraikany mivantana amin'ny vidin'ny famokarana. Amin'ny tranga fiasa mahery vaika, ny halavan'ny velaran'ny horonan-taratasy tokana dia voafaritry ny hafainganam-pandehan'ilay horonan-taratasy. Ny hafainganam-pandehan'ilay kodiarana dia mifanitsy amin'ny kianja amin'ny halavan'ny roller, ny halavan'ny roller dia avo roa heny, ary ny hafainganam-pandeha maika dia tonga ampahefatry ny tany am-boalohany.
Rehefa tonga amin'ny haavon'ny sasany ny halavan'ny roller ary ilaina ny hafainganam-pandeha ambony kokoa, ny roller dia takiana mba hanana modulus elastika avo lenta. Ny modulus elastika an'ny horonam-baovaon'ny gazy karbonika dia 240GPa, izay lehibe kokoa noho ny vy ary maivana kokoa amin'ny lanjany. Noho izany dia kely ny inertia izay afaka mampihena be ny fihenjanana ateraky ny vokatra toy ny horonan-taratasy mandritra ny fiasana, izay tsara kokoa ny fandrindrana ny tany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha na ny fihenam-bidy.
Teo aloha: Fantsom-boankazo
Manaraka: hazo teleskaopy fibre karbaona ho an'ny pou fanadiovana varavarankely